Chiyero cheDNA chinodhura zvakadii muUnited States - Zvinyorwa
shiri dzinobhururuka mumafafitera zvichireva
unoviga sei nhamba yako?
haikwanise kugadzirisa kune ios 10
iphone kufona mutauri haishande
Yakawanda sei bvunzo yeDNA inodhura muUnited States?
Cu Nto Cuesta Una Prueba De Adn En Estados Unidos
Chiyero cheDNA chinodhura zvakadii? dna bvunzo mutengo muUSA.
Kuedzwa kwemusha kwakaputika mumakore achangopfuura uye kune zvakawanda zvingasarudzwa zvekusarudza kubva pane izvo chaizvo kana pasina mhinduro imwechete kumubvunzo wakakosha-kuru. Zvese Kuongororwa kweDNA inonyanya kufarirwa ndeye madzitateguru uye iyo dzinza , saka isu tichatanga navo tobva taenda kune vamwe.
Chiyero cheDNA chinodhura zvakadii?
Yakawanda zvakadii iyo yekuyedza kubaba inodhura, DNA yekuongorora mutengo . Kune imwe Paternity bvunzo inoitwa murabhoritari inozivikanwa, mutengo uri $ 130 kusvika $ 200 kana ukatora DNA kumba. Kana iwe uchida mhedzisiro yedare, mutengo wacho $ 300 kusvika $ 500 . Mutengo we DNA bvunzo yemadzitateguru nharaunda kubva ku $ 49 uye $ 200 kana zvimwe, zvinoenderana nerudzi rwemashoko akaisirwa.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti kana iwe ukaraira yemahara bvunzo kit yekuteedzera kumba, mhedzisiro yacho haigamuchire mudare nekuti nyanzvi haina kukuona uchipa iwo masampuli.(izvi zvinongoshanda chete kana humbowo hunodiwa nedare)
Mutengo wehukama kuyedza DNA
Maternity DNA bvunzo: Rudzi urwu rwekuongorora runotarisa kana mukadzi akaongororwa ari amai vekubereka vemwana akaongororwa. Inowanzo shandiswa mune zviitiko zve kutama kugamuchirwa .
Mari yemuyedzo uyu ingangoita: $ 200- $ 450
Vanasekuru navanasekuru DNA Bvunzo: Kana baba vanonzi vasipo kuti vaongororwe, iyo DNA yemumwe kana sekuru nasekuru vanoongororwa kuna amai + mwana kuti vaone kubatana kwehupenyu.
Mari yemuyedzo uyu ingangoita: $ 300- $ 500
DNA bvunzo pakati pehama: bvunzo Mukoma nemunin'ina uye mukoma nemunin'ina vanogona kubatsira kumisikidza hukama hwehama / hanzvadzi. Izvo zvinonyanya kukosha kune zvinopinda munyika uye nhaka zvinangwa.
Sekuru-Sekuru DNA Bvunzo: Rudzi urwu rwekuongorora runofananidza iyo DNA yemukoma wababa ari mubvunzo neDNA yemwana kuti aone kana iine hukama nehupenyu.
Mhuri yekuvakazve DNA bvunzo: Bvunzo iyi inoedza iyo DNA yehama dzakasiyana dzepedyo kuona hukama hwehukama, kazhinji kuzivisa baba vemwana.
Mari yemuyedzo uyu ingangoita: $ 450- $ 650
Mapatya zygosity DNA bvunzo: Ongororo iyi inosimbisa kana mapatya akafanana kana hama. 70% yemapatya maviri amniotic masaga panguva yekuzvitakura ihama, asi makumi matatu muzana akafanana.
Mari yemuyedzo uyu ingangoita: $ 250
Yakawanda sei bvunzoDNAnezvekuva mubereki?
Mutengo wemabvunzo evabereki uchatangira pamadhora makumi matanhatu nepfumbamwe kusvika pamadhora mazana matatu nemapfumbamwe nemapfumbamwe , zvinoenderana nemuyedzo uye rabhoritari yakashandiswa. Mhedzisiro inogona kuwanikwa zuva rimwe chete raunoraira mune dzimwe nguva. Mutengo wezuva rimwechete mhedzisiro i $ 245.
Kune mashoma chete marabhabhu ayo anopa zvakafanana zuva mhedzisiro. Nekudaro, kune akawanda akawanda anopa mhedzisiro muzuva kana maviri. Kune vanhu vazhinji, iyi ndiyo sarudzo inosarudzwa.
Mamwe marabhu muUS angatora kusvika pavhiki kupa zvivakwa zveyababa. Labs dzinotora kusvika pavhiki kuti dziwane paternity bvunzo mhedzisiro dzinowanzo mutengo wemasevhisi avo padyo nepasi pezasi peiyo renji.
Ivo vasina chokwadi kana vachizoita bvunzo mushure mekutora iwo masampuli vanogona kukumbira a kit yekuyedzaDNA kusununguka . Nekudaro, nekuda kwekuti kit iri yemahara hazvireve kuti maitiro ese akasununguka. Mushure mekunge masampuli aunganidzwa, anofanirwa kuendeswa kune rabhoritari kuti igadziriswe.
Kune mari inobhadharwa mukutumira iwo masampuli uye mubhadharo wekugadzirisa iwo masampuli. Zvakadaro, kit yekuyedza yeDNAYemahara inogona kunge iri zano rakanaka kana baba vari kusahadzika. Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti kana iwe ukaraira yemahara bvunzo kit yekuteedzera kumba, mhedzisiro yacho haigamuchire mudare nekuti nyanzvi haina kukuona uchipa iwo masampuli.
Kit yekuyedza yeDNAyemahara kana yakachipa inogona kupindura mibvunzo nezvekuva mubereki pamberi pako funga kuendesa nyaya kudare chero bedzi uine chokwadi chekuti urikutumira masampuli kubva kuna vanonzi baba nemwana ku laboratori, uye kuti iwo masampuli haaigona kukanganiswa nawo.
IyobvunzoDNAkumadzitateguru iri tsika iri kukura. Miedzo yemadzitateguru inogona kuburitsa mashoma emhando dzakasiyana dzeruzivo. Rudzi rwekutanga rwezveruzivo rwaanoratidza ndirwo rudzi . Vanhu vazhinji vanofunga kuti ndevedzinza rimwe chete, asi vozoona kuti kune madzinza mazhinji mumajini avo.
Hunhu uhwu hunogona kuve hwakakosha kune avo vanotorwa uye vanoda kudzidza zvakawanda pamusoro pavo. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti dzinza dzimwe nguva rinogona kuita kuti munhu awedzere kutarisana nemhando dzakati dzezvinetso zvehutano kana zvirwere. Kuve neruzivo urwu kunogona kubatsira kune avo vanoshanda nehunyanzvi nezvehutano kuti vaongorore mamiriro.
Dzimwe nguva kuziva iyo rudzi inogona kuva chikonzero chekuzvikudza. Munhu asingazive mavambo edzinza rake anogona kufarira kudzidza nezvechikafu chinodiwa uye zvetsika tsika zvine chekuita negene yavo. Kuziva rudzi rwemunhu kunogona zvakare kupa iye munhu pfungwa yekuve wega. Iyo inogona kuve nzira yekuti munhu apemberere iwo akasarudzika.
IyobvunzoDNA yedzinza rinogona kubatanidza hama dziri kure. Avo vakashandisa bvunzo dzemadzitateguru munguva yakapfuura vane mukana wekunyora zvinyorwa zvavo zvemadzitateguru.DNAmune dhatabhesi. Munhu ari kuendesa sampuro yemhando iyi bvunzo anogona kuenderana neyakoDNAneaya akatonyoreswa mudhatabhesi.
Mune zvimwe zviitiko, munhu anogona kuwana hama kana hama dzepedyo dzinogovanaDNAZvakafanana. Mune zvimwe zviitiko, munhu akarerwa anogona kuwana vabereki, vanasekuru kana vanasekuru vakagamuchirwa kumwe kunhu.
Yakawanda sei bvunzoDNAkumadzitateguru?
Mazita emadzitateguru eGOUTKuedza Sarudzo ipa runyorwa rweumwe neumwe kuongorora madzitateguru kuti iwe unogona kutenga online kuenda kumba, uye inoratidza mutengo weimwe bvunzo yeDNA.
Mitengo yemiyedzo yemadzitateguru inotangira pamadhora makumi matanhatu nemapfumbamwe kusvika pamadhora 1,399. Mitengo kumagumo epamusoro ichasanganisira mamwe mafomu euchapupu hweDNAzvine chekuita nemamaki ehutano nezvirwere zvemaranzi. Kune avo vanongoda kuziva kwavakabva, bvunzo dzakachipa.
Mazhinji makambani anopa kuyerwa kwemadzitateguru ichapa mhedzisiro mumavhiki mana kusvika gumi nemaviri . Mamwe makambani muUnited States anogona kuve nemhedzisiro mune mashoma sevhiki mbiri. Mutengo wacho haunyatsoenderana nekuti zvinotora nguva yakareba sei kuti uwane mhinduro.
Dzimwe nguva vanhu vanoda kushandisa chenjedzo pakusarudza vanhu veupenyu, kunyanya kana vachibva munharaunda dzakabatana. Izvi zvinonyanya kukosha kune avo vasina ruzivo nezvevabereki vavo chaivo. Vakaroora vanogona kuendesa muyenzaniso kuti vaone kana uye kusvika papi ivo vane hukama. Izvi zvinokwanisa kudzivirira vakaroorana kubva pakuva nevana vakaremara kuberekwa kana zvinogona kudzivirira kunyadziswa kwekufambidzana nehama yepedyo.
Kune mienzaniso yevaroorani vanotanga kudanana, kungozoziva kwapera makore kuti ivo vane hukama mushure mekuzivana kure uye hama dzichivapa imwe nhoroondo. Zvirinyore kutumira masampuli kuyedzwa kweDNAkutanga, kudzivirira nhau dzinovhundutsa pane inotevera zuva.
Kana munhu asarudza bvunzo yeDNA yeMadzitateguru, zvinoenderana nemuedzo waunosarudza, unogona kuwana kuongororwa kwakazara kwerudzi rwako kana kuongororwa kwerudzi rwako rwechirume neechikadzi. Nekudaro, vanhurume chete ndivo vanogona kuwana ruzivo pamusoro pezera ravo rechirume, sezvo vari varume chete vanotakura Y chromosome iyo inoshandiswa kuteedzera madzitateguru emadzibaba.
Vakadzi vanogona kuwana kunzwisiswa kukuru kwenhoroondo yemhuri yavo nekuyedzwa kwemadzitateguru, uye ivo vanogona kukumbira hama yavo kana baba kuti vatore bvunzo yemadzitateguru kuti vatore mufananidzo uzere wemadzinza avo evarume nevakadzi.
Mhedzisiro yacho dzimwe nguva inopihwa muchimiro chenhoroondo. Uye zvakare, iyo mishumo inowanzo kupa ruzivo rwekuti vangani vanhu varipo vane zvakafanana magene mamaki uye kuti akagovaniswa sei munzvimbo.
Kune vamwe vanhu, kugoverwa kwavo mamakiDNAinogona kupa chiratidzo kune kwakatangira madzitateguru ako ari kure. Vanhu vazhinji vanoona kuti idzi nhoroondo dzinogona kuramba kana kutsigira nhoroondo yemuromo yakapihwa nezvizvarwa zvekare mumhuri dzavo.
Kune vanhu vazhinji,iyobvunzoDNAkune hutano zvakakosha. Kune zvikonzero zvakawanda zvekuongorora zvemagene kana zvakagara nhaka matambudziko ehutano. Chimwe chikonzero ndechekupa vanachiremba mufananidzo uzere nezvehutano hwako, kana paine mukana wekupfuudza mamiriro kuvana vako.
Tay Sachs, chirwere cheHuntington, sickle cell anemia, cystic fibrosis, uye Down syndrome mienzaniso yezvinetso zvakadaro. . Zvizhinji zvezvirwere izvi zvichave pachena pakuzvarwa kana munguva pfupi inotevera. Chimwe nechimwe cheizvi, kunze kwechirwere chaHuntington, chinoda kupindira kwechiremba kubva pakuberekwa kana mukati memavhiki mashoma ekutanga ehupenyu.
Iyo Hutington chirwere inobata vanhu vakuru muhujaya hwehupenyu. Nhengo dzemhuri dzinowanzoziva mukana wekuvandudza chirwere ichi, zvichibva pane nhoroondo yezvokurapa yezvizvarwa zvakapfuura. Mwana wega wega wemubereki ane geni reHuntington ane mukana we50% wekubata chirwere ichi.
Kana mwana akasatora geni, vana vavo havazowana. Izvi zvinogona kuve zvakakosha kune avo vanofunga nezve vana kana avo vasina nhoroondo yemhuri yekuzvarwa nekuda kwekugamuchirwa.
Mhuri zhinji dzinosarudza kuti vana vavo vaongororwe kana mubereki aonekwa aine chirwere ichi. Huntington kashoma kubata vana vachiri kuyaruka, asi zvinoitika. Chero chipi chehosha dzinobatwa chete nehutachiona chinozivikanwa kuve zana muzana, sevaya vanogamuchira iyo geni inoenderana neicho chiitiko vanozopedzisira vatambura nacho.
Nekuda kwekuti zhinji dzezvirwere izvi dzinoda kuwedzerwa kurapwa, mhuri dzinogona kuronga zvakasiyana nezveramangwana kana vachiziva nezvazvo zvisati zvaitika. Kuronga kumberi kunogona kubvumidza kune zvemari uye zvekutarisirwa.
Zvirwere zvakawanda zvinogona kuve mugumisiro wekubatanidzwa kwemajini, mararamiro, uye maitiro. Type II chirwere cheshuga ndechimwe chazvo. Nepo kugara kwekugara uye kudya kwakashata kuchipa, kune vanhu vanoshanda vanodya vane hutano uye vanotamburawo nechirwere cheshuga chechipiri. Kuziva pamberi apo kana munhu aine majini echiratidzo chechirwere kunogona kubatsira munhu kusarudza mararamiro aachaita.
Semuenzaniso, kutora matanho ekuwedzera pamwe nesarudzo dzekudya uye kuchengetedza huremu hune hutano zvinogona kuve pekutanga. Vanachiremba vanoziva nezvemagene maitiro mumhuri anogona zvakare kubatsira varwere kuchengetedza hutano hwakanaka mararamiro. Kuona kwekutanga uye kusimudzira kwechirongwa chekuita kazhinji kunogona kuita mutsauko muhupenyu hwekutarisira uye hupenyu hwehupenyu hwevanhu ava.
Yakawanda sei bvunzoDNAkune hutano?
Iyomuedzo weDNAKune hutano uye hutachiona hutachiona hwaimbove hwakarambidzwa kune vanhu vazhinji. Zvino, vanhu vanoda kuziva kuti sei vangave vari panjodzi vanogona kuzviita zvisingadhuri.
Bvunzo dzehutano dzinogona kuita shoma kunge $ 96 kana yakawanda se $ 500 , zvinoenderana nezviyero zvemiyedzo uye rabhoritari yakasarudzwa. Vamwe vanhu vangangoda muyedzo weDNAyekudya uye kugwinya, inovhara maseti akasiyana emagenetic mamaki uye maitiro senge metabolism.
Aya mamaki akakosha kune vatambi vanoda kukwidziridza kudzidziswa, kudya kunovaka muviri, kugwinya, uye kupora. Metabolism-yakatarisana nemishumo inogona kukubatsira iwe kugadzira zvakasarudzika zvirongwa zvekusimbisa muviri izvo zvinokubatsira iwe kuti uwane zvakakwana mwero. Vanogona zvakare kubatsira kudzivirira kukuvara kuburikidza nezvakakodzera zvirongwa zvekuzorora.
Iyomuedzo weDNAhazvisi zvevanhu vese. Nekudaro, vanhu vazhinji vanosarudza kutora zvinhu mumaoko avo. Nezvikonzero zvekuva mubereki, kuziva nekukurumidza kuri nani pane kumberi. Panyaya dzine chekuita nedzinza, vanhu vangangoda kutsvaga hukama hwemhuri kana dzinza, kuti uwane pfungwa yekuti ndivanaani.
Bvunzo dzehutano dzinogona kuve dzakakosha kune avo vasina nhoroondo yehutano hwemhuri kana vanoda kuvandudza hutano hwavo uye kugwinya.IyobvunzoDNAinodhura kune vanhu vazhinji, zvisinei nezvavanokurudzira.
Yakawanda zvakadii iyo bvunzo yeDNA yemubereki inodhura?
Bvunzo yeAcestry DNA
Yakawanda zvakadii bvunzo yeDNA yemadzitateguru inodhura?
Kuongororwa kweDNA kwehutano.
Yakawanda sei iyo DNA hutano bvunzo inodhura?
Mari yakawanda sei yekuvhiya zamu muUSA?
Yakawanda zvakadii iyo Tattoo inodhura muUnited States?
Zvinodhura zvakadii kupfeka mabhureki muUnited States?
Basa remhino rinodhura zvakadii? Rhinoplasty
Marii yekuzadza mazino inodhura muUnited States?